China Intelligent Aquarium Light, Top Quality Led Aquarium Chiedza, Led Aquarium Light Coral Reef, Coral Reef Yakagadzirwa Aquarium Lighting Manufacturer
Tsanangudzo:Akachenjera Aquarium Chiedza,Top Quality Led Aquarium Chiedza,Led Aquarium Light Coral Reef,Coral Reef Yakakonzera Aquarium Chiedza,,
Zvigadzirwa zve Led Reef Lighting , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Akachenjera Aquarium Chiedza , Top Quality Led Aquarium Chiedza vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Led Aquarium Light Coral Reef R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
165W Phlizon Yakatakurwa Mwenje weAnarium muNhema
Coral Reef Rakakonzera Aquarium Chiedza neChikoro
White & Bluu LED LED Aquarium Light for Fish Reef Tank
Popular Best Best Selling Intelligent LED Aquarium Light
Chiedza che LED Chikwata cheAraqarium Marine Coral Reef Lighting
Packaging: Imwechete saizi yepasipi: 590 * 240 * 110mm
165W Phlizon Yakatakura Chiedza cheAnarium muBlack Dimmable yakazara Spectrum Yakatengeswa Iro Hove Chiedza cheRunalwater uye Yakachena Coral Reef Lamp Aluminium 54cm Nice Phlizon yakatungamirwa aquarium mwenje wakanaka kune kukura kune hutano hwe...
Coral Reef Rakakonzera Aquarium Chiedza neChikoro Zvinhu zviri kuchinja munyika yekuvhenekera, uye mazuva ano, kufambisa kwekuchinja kwakanaka kwazvo. Izvo zvose zvakatanga nekuuya kwe LED chiedza, izvo zvakaunza kuchinja kukuru kumakambani e...
Marine Reef LED Lighting System for Aquarium . Zvinhu zviri kuchinja munyika yekuvhenekera, uye mazuva ano, kufambisa kwekuchinja kwakanaka kwazvo. Izvo zvose zvakatanga nekuuya kwe LED chiedza, izvo zvakaunza kuchinja kukuru kumakambani e aquarium....
Hig h Power DIY LED Coral Reef Aquarium Light 165W LED Aquarium Light ndiyo yakakosha nokuda kwemvura yakadzika nemhando zhinji yezvirimwa, hove, uye coral reef. Iine simba rakakwana uye chiedza chechiedza chekuchengetedza mhuka dzakawanda...
White & Bluu LED LED Aquarium Light for Fish Reef Tank Applications of LED Aquarium Light Inokodzera chero nguva yekukura yemiti, uye inobatsira pakurima kwemvura kana ivhu Yakakodzera gindu remukati, pombi, munda, kudyara, kubereka, purazi,...
LED Aquarium Light for Saltwater Coral Reef Fish Marine Tank Tsanangudzo: IT EMS akatungamirira Hama Dzedu Dziri Lighting LEDs Power Consumption 352W Dhigiriro (L * W * H) 540mm * 210mm * 60mm Kuvhara (L * W * H) / BOX 590mm * 260mm * 110mm NW 4.2kg...
165 Watt Cree LED Aquarium Lighting for Coral Reef Cree LED aquarium magetsi inokurumidza kusarudza kusarudzwa mukati meatangi ehove. Inofanirwa kune zvose zvisikwa zvegungwa, shandisa mazhenje ebhuruu usiku, inogona kuratidza firiorescence ruvara...
LED Aquarium Lamp for Coral Reef Lighting Dhiyabhorosi rekugadzirisa mhepo yakave yakafanana nechinangwa chekuva ne aquarium . Hapana chinoda kuva nemvura yakasvibiswa isina chiedza chezviedza pairi. Zvakanaka, idzi mwenje dze LED hadzisi kungova...
36 Inch LED Aquarium Light for Coral Reef Pamusoro 36 Inch LED Aquarium Lighting -Kukosha kwemari yako. LED ndiyo inozivikanwa
Popular Popular Best Selling Intelligent LED Aquarium Light for Water Fresh / Saltwater Isu tinonyanya kuzivikanwa muhupamhi hwepamusoro re LED aquarium chiedza pamusoro pemakungwa, reef, mvura yemunyu, mvura yakadzika, nemvura yakachena yemvura uye...
Chiedza che LED Chikwata cheAraqarium Marine Coral Reef Lighting Iko mbeu dzegungwa dzinokura nemwenje dze LED? Wokupedzisira Taura Pakushandisa LEDs Sekuwedzera Zviedza. Sezvaunogona kuona, mwenje dze LED dzinofanirwa kuonekwa seimwe...
China Led Reef Lighting Vatengi
Sei tichifanira kusarudza isu?
1) Tinopa zvinhu zvakasiyana-siyana zvemhando nezvinhu zvose zvehutano zvinogona kugadzirisa zvinoda mari zhinji munyika.
2) Nezvose zvaunobvunza pamusoro pedu kana zvigadzirwa zvedu, tichakupindura zvakadzama mukati ma 24hours.
3) Unhu huongororwa mune dzimwe nguva kusati kutengeswa kunovimbisa zvinhu zvinogadzikana nehutachiwana deta.
4) Bhizimisi rekutengesa, boka rejinijini, uye mushure mekutengeserana kwebasa.
5) Chero zvigadzirwa zvisina kukwana mukati mewaranti zvichawana kugadziriswa kana kugadziriswa pasina mutemo.
6) Kudzivirirwa kwekutengeserana kwako, pfungwa dzekugadzira uye zvose zvehupfumi hwako.
7) OEM & ODM zvinogamuchirwa, mutauro weOEM uripo.
Philizon inofarira mukurumbira wakakura mukukura kwetambi yakatungamirirwa uye A quarium Led Light minda yose muEurope uye America, Philizon inomirirawo kutora teknolojia yepamusoro yekugadzirisa itsva uye yakakonzerwa yakakonzera kukura chiedza uye Led Reef Lighting nguva dzose sechikumbiro chemusika. Nhengo yedu yeR & D nevanhu vanopfuura 10 vane ruzivo rwakawanda mukuonekwa maitiro, magadzirirwo emagetsi, heat dissipation simulation analysis, optical lens design, lightcontrol system etc. Nyaya ye hydroponics yedu yakazara inotungamirira yakakura inokura uye Led Reef Lighting ari oga modules, tina 10 mamwe maitiro ekugadzirisa patent uye kushandiswa kwemuenzaniso patent kusvikira nhasi.
Redu Rwedu Rwenzira Yechiedza yakakurumbira mumatengesi anotungamirirwa, inokonzera maitiro ayo akanaka uye yakakwirira uye kukwikwidzana mutengo.
1.Upenyu hwemakore hunopfuura maawa mashanu, maawa mashoma ekugadzirisa mari.
2. Kuchengetedza kwekuchengetedza, kuchengetedza kudarika 80% masimba kupfuura tsika dzeHPS.
3.Kuedza kwakanyanya, 90% yechiedza ichabatwa nemiti yemvura, asi 8% -10% kuHPS.
4.Kuvaka-mukunakisa, zvinogona kugadzirisa kupisa kupisa zvakanaka.
5.Ugadziriswa mune simba, CE inogamuchirwa, Hapana kuiswa kwekugadziriswa, zvinongova nyore uye zvakachengetedzeka zvinogadzirirwa zvakananga ku AC85V-264V, hapana kujekesa uye ballast inoda.
Inoshandiswa pakushandisa mwenje panguva imwe chete.
Quality Control systems uye pashure-kutengesa
Zvose marambi apfuura zvakanyatsotarisana nehutano uye zvakanyatsogadziriswa vasati vatumira. Mukuda kuti vatengi vedu vatore marambi emhando yakakwirira, tinobatanidza kukosha kumashoko ose.
1. Koral reef, chiedza chehove , kutungidza tangi, magetsi emvura
2. Chiedza che aquarium, unyanzvi we aquarium, shopu ye aquarium, nzvimbo ye aquarim
3. Hove yezvokuvhenekera, hove dzehove, mvura yakachena, chiedza chemvura
Unyanzvi: isu tiri vhizha rekuwedzera kuwedzera magirasi uye LED aquarium chiedza manufactuer muno muChina, iwe uchawana Professional uye High quality LED Kukura Mwenje uye Led Reef Lighting kubva kwatiri uye kuwana chivimbo chakanaka.
Mari-inoshandiswa Mutengo: isu hatina mutengo wakaderera, asi Led Reef Lighting yaunowana kubva kwatiri inodhura-inoshanda, yakanaka uye yepamusoro mutengo.
Kukunda-kukunda mamiriro: Bhizimisi rekukurumidza ndiro basa redu, tichapa zvakanaka Led Reef Lighting uye kushumira kunopisa kuti uite ukama hwebhizimisi kwenguva refu newe
24/7 Basa risina kubhadharwa nevatengi: isu tinogara tiri pano nokuda kwebvunzo yako, chero mubvunzo unongotumira email kana kutidana, tinoita zvatinogona kuti tikubatsirei nzira yose.
Nguva yakareba warranty: Usazvidya mwoyo pamusoro pehutano uye isu tinokuvimbisa iwe 3years warranty kuti mbeu yose inotungamirirwa iwedzere chiedza uye koral reef inotungamirira aquarium chiedza.
Kutenga kwakanakisisa kutenga: iwe uchawana seriverti yeptop yawakave nayo, tanga uedza uye iwe uchatarisa.
Zvitengesi zvedu zvakasiyana:
Chirairo che LED chinokura magetsi chekugadzira zvekurimwa;
L EDarium zviedza zvehove matangi, korori, tangi remvura yemunyu, tangi yegungwa netsanga, korori, sps, lps, hove, etc;
Tigamuchirei noushamwari kuti tishanyire pfekitari yedu chero nguva uye isu tichakutorera pane imwe ndege muSenzhen.
Akachenjera Aquarium Chiedza
Top Quality Led Aquarium Chiedza
Coral Reef Yakakonzera Aquarium Chiedza
Mvura yakachena Aquarium Chiedza